Midowga Yurub oo war ka soo saaray ciidamada wali ku sugan Muqdisho - Axadle – Axadle
Midowga Yurub oo war ka soo saaray ciidamada wali ku sugan Muqdisho – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Midowga Yurub ayaa dalbaday in ciidamada laga soo saaro Axadle Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo xiisadaha ay sii kordhayaan.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Ka saarista Milatariga Caasimadda Muqdisho waa muhiimad hadda. “Dadka doonaya inay door wanaagsan ka ciyaaraan doorashada waa inay ku taageeraan Ra’iisul Wasaare Rooble howshan muhiimka ah.”
“Muqdisho oo loo qeybiyo maleeshiyo ama ciidamo amni oo leh amar ka baxsan xariiqda taliska ma caawin doonto dadka Soomaaliyeed,” ayuu yiri.
Hub ka dhigista Caasimadda Muqdisho ayaa ah mudnaanta haatan. Kuwa doonaya inay door wanaagsan ka ciyaaraan doorashada ka hor waa inay ku taageeraan Ra’iisul Wasaare Rooble shaqooyinkiisa muhiimka ah. In Muqdisho loo kala qaybiyo malleeyshiyaad ama ciidan amni oo ka amar qaata waxna tari mayso Soomaalida
– Nicolas Berlanga (@NBerlangaEU) 3 Maajo 2021
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad balaaran oo lagu soo dhaweynayay R / wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cabdi faarax Shirdoon Sh Axmed.
Si kastaba ha noqotee, xoogagga ka soo horjeeda kordhinta, oo hadda u muuqda inay ku biireen midowga musharraxiinta, waxaa mideeyay kuwa ka goostay oo badan.
Taliye ku xigeenka qeybta gaarka ah ee booliska Moomin Ciise Maxamuud iyo ciidamo uu wato ayaa shalay ka baxay dowlada federaalka kuna biiray mucaaradka mucaaradka ee Badbaado Qaran.
Tani waxay ka careysiisay dowladda oo xalay u digtay siyaasiyiin ay sheegtay inay kala qeybisay oo burburisay ciidankii ku sugnaa Muqdisho.
Mucaaradka ayaa ku adkeysanaya in uusan jirin ra’iisul wasaare la taaban karo oo rumeysan, sidaa darteedna ay ku sii negayaan dalkooda ay martida u yihiin ilaa doorashada, maaddaama ay ciidamadu si isdaba joog ah u weerareen ra’iisal wasaare IRO qaar ka mid ah musharrixiinta, iyagoo aan lahayn difaac badan.
Kylian Mbappe is an element of the PSG squad for Man Metropolis’s second stage
RASMI: Garsooraha Kulanka Cidiyaha Lagu Dagaalamayo Ee Chelsea vs Actual